कतारमाथि उसका छिमेकी राष्ट्रको प्रतिबन्ध चौथो वर्षमा प्रवेश, कस्तो छ कतारको हालको अवस्था ? - Himali Patrika
कतारमाथि उसका छिमेकी राष्ट्रको प्रतिबन्ध चौथो वर्षमा प्रवेश, कस्तो छ कतारको हालको अवस्था ?
हिमाली पत्रिका २१ जेष्ठ २०७७, 7:34 am
यसै वर्ष यी असमझदारी हट्ने र पूर्ववत सम्बन्ध कायम हुने संकेतहरु देखिएका भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । सन् २०१७ मे २४ मा कतारका शासकको नामबाट राज्य संचालित समाचार एजेन्सीको वेबसाइटमा एउटा वक्तव्य प्रकाशन हुन्छ । यो विज्ञप्तिमा इस्लामिक क्रान्तिलाई कतारको समर्थन रहेको तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आलोचना गरिएको थियो।
उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन भएलगत्तै कतारले सो सामग्री गलत भएको र कसैले समाचार संस्थाको साइट ह्याक गरेको जनायो । तर यो विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर खाडी क्षेत्रका संचार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए । जुन ५ मा साउदी अरेबिया र यसका गठबन्धन मुलुकहरुले एकाएक कतारसँगका सबै सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरे।
यस घोषणामा कतारसँगको हवाई, सडक, सोझो सिपिङ र कुटनीतिक सम्बन्ध सबै तोडिएको कुरा उल्लेख थियो । अरु मुलुकले पनि आफ्नै किसिमले कतिपय अवस्थामा सामान्य प्रतिबन्धहरु घोषणा गरे। त्यसको एक दिनपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै आफूले हालै अरब राष्ट्रहरुको भ्रमण गर्दा कतारमाथि औंला उठाएका र कट्टरपन्थी विचारधारालाई समर्थन जनाएका बताएका थिए ।
उक्त १३ बुँदे मागपत्रमा रियादको मुख्य दुश्मन इरानसँगको सम्बन्ध कतारले तोड्न आग्रह गरिएको थियो । तर कतारले साउदी गठबन्धनका सबै माग अस्वीकार गरिदियो, किनभने कतारको भनाईमा यी मागहरु यथार्थपरक नभएका र कार्यरुपमा परिणत गर्न नसकिने थिए ।
यस विभाजनले क्षेत्रीय यात्रामा जटिलता उत्पन्न गर्नुका साथै परिवारहरुलाई विच्छिन्न बनाएको छ भने कतारको व्यवसायमा लागत बढाएको छ । दोहा विरुद्धको यस गठबन्धनले आफ्ना मागहरु अरु थप्यो । जुलाई २०१७ मा गठबन्धनले कतारसामू १८ जना शंकास्पद अतिवादी समूह र संस्थाको सूची दियो ।
यो सूचीमा उल्लिखित व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । पछि यो सूचीमा नाम थपेर ९० बनाइयो । सन् २०१७ अगष्टमा बिआउटक्यू नामको भूउपग्रहले फुटबल समेतका मुख्य कार्यक्रमहरुको साउदी दर्शकलाई ध्यान दिएर प्रसारण शुरु गरेको थियो ।
कतारस्थित खेलकुद प्रसारक बीइनले साउदीले आफ्ना सामग्री अनधिकृत रुपमा प्रसारण गरेको आरोप लगायो । बीइन र साउदीबीचको यो विवाद अझै पनि कानुनी निरुपणको विषय बनेको छ । सन् २०१८ भर कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच हवाई मार्गको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । यो विषय अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा विचाराधीन छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले कतारप्रति केही नरम र लचक रहेको बताएका थिए । उनले कतारका शासक अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल–थानीलाई अप्रिल २०१९ मा ह्वाइट हाउसमा आमन्त्रण गर्नु भएको थियो, र त्यस भेटवार्तामा अल–थानीलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले “मित्र” भनी सम्बोधन गरेका थिए ।
तर डिसेम्बर २०१९ मा कतारका अमिरले रियादमा आयोजित खाडी सहयोग परिषदको बैठकमा सहभागी हुन साउदी अरेबियाले गरेको निमन्त्रण अस्वीकार गर्नु भयो । उनको साटो तत्कालीन प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाह बिन नासेर बिन खलिफा अल–थानी बैठकमा सहभागी भए।
फेब्रुअरी २०२० मा कतारका विदेश मन्त्रीले साउदी अरेबियासँगको वार्ता एक महिना पहिले नै स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो, तर उहाँले साउदी अरेबियासँगका असमझदारी हटाउन वार्ता प्रयास जारी रहने बताए ।
मे २८ मा कतारका विदेश मन्त्रीले एएफपीसँगको कुराकानीमा जिसीसी परित्याग गर्ने कुराको खण्डन गरे । तर उनले यस समूहको कार्यप्रति शंका व्यक्त गर्दै भने, क्षेत्रको कुटनीतिक संकट समाधान गर्न यो संस्था पनि असफल भएको छ ।